Ciidammo Itoobiyaan oo askar kenyan ah laayay.
Urur ay Oromadu lahayd oo jiray in ka badan 40 sano oo la mamnuucay.
8 Sarkaal oo ahaa madaxda hogaanka isgaadhsiinta ee Itoobiya oo shaqadoodii laga eryay
Qarmada midoobay oo sheegtay in laga yaabo in uu dagaal ka dhex dhaco Itoobiya iyo Eritrea.
Barnaamujkii aragtida halgamaaga iyo suugaan halgameed
Ciidamo aad u hubaysan oo Itoobiyaan ah ayaa dilay labo sarkaal oo ka tirsanaa difaaca bulshada ee dalka Kenya iyo afar qof oo kalluumaysato ah, ka dib markii uu dagaal xun ka dhacay Laagta Turkaana oo woqooyiga galbeed ee dalka Kenya ku taala, sidaasna waxaa horraantii toddobaadkan sheegay booliska Kenya. Wuxuu kaloo intaas warku ku daray in sargaal seddexaadna ilaa iyo hadda la la’yahay.
Wargaysyada Kenya ayaa soo qoray in ciidammadan, oo loo malaynayo inay ka tirsan yihiin qabiilka Itoobiyaanka ah ee Merrile, ay markii hore soo weerareen lix qof oo kalluumaysato ah oo Kenya u dhashay, isla markaana ay afar ka mid ah dileen, ka dibna ay weerareen koox ciidammada difaaca bulshada ka tirsan oo halkaas kormeer ku maraysay.
Ciidammadan weerarka soo qaaday waxay tiradoodu gaashaysay 250 askari, waxayna askartaas dilka gaysatay ku hubaysnaayeen qoryaha fudud.
Warar aanu ka soo xiganay ilo muhiim ah ayaa sheegaya in ay dawlada Itoobiya mamnuucday urur la yidhaahdo Mecha and Tulema Association (MTA), oo ahaa urur ku hawlanaa horumarinta deegaanka Oromoda in ka badan 40 sano.Warku waxa kale oo uu intaa raaciyay in ururkan la mamnuucay 3dii bishan julay ee aynu ku jiro.
Waxay dawlada Itoobiya ururkan ku eedaysay in ay ka soo horjeedaan nidaamka ay wayaanuhu wax u wadaan, gaar ahaan, waxa uu ururkani si cad uga soo horjeedasaday go’aankii ahaa in caasmida Oromada laga raro magaalada Addis Ababa, halkaas oo uu ururkani mudaharaadyo aad u balaadhan oo arintas lagaga soo hor jeedo uu qaban qaabiyay.
Dawlada wayaanaha ayaa kadib xidhay madxadii ururkaas islamarkaana waxay albaabada isugu laabatay xafiiskii ururkaas.
8 Sarkaal oo ahaa madaxda hogaanka isgaadhsiinta ee Itoobiya oo shaqadoodii la eryay.
Wariyaha wakaaladda wararka Ogdeniya u jooga magaalda Addis Ababa ayaa noo soo tabiyay in ay dawlada Itoobiya shaqadoodii ka caydhisay 8 sargaal oo ka tirsanaa hogaanka isgaadhsiinta ee Itoobiya.
Saraakiishan ayay xukuumada Zenaawi ku eedeeysay musuq maasuq, hasa yeeshee dad ku dhadhaw saraakiishaa shaqada laga eryay, ayaa noo sheegay in tuhun siyaasadeed uu soo galay madaxdaas hawlgabka laga dhigay. Ragan ayaa lagaga shakiyay in ay ku xidhan yihiin mucaaradka xukumada Itoobiya ee sii cadceedsatay.
Dadka siyaasada Itoobiya indha indheeya ayaa talaabadan ku tilmaamay mid xididada loogu siibayo dadka farsamo yaqaanada ah ee adeega bulshada gacanta ku haya.
Qarmada midoobay oo sheegay in laga yaabo in uu dagaal ka dhex dhaco Itoobiya iyo Eritrea.
Waragyska Ethiopian Reporter ayaa qoray saadaal tilmaamaysa dagaal ka dhex oogma Itoobiya iyo Eritrea.
Sargaal sare oo ka tirsan qarmada midoobay ayaa walwal weyn ka muujiyay “khilaafka ka dhexeeya wadamada Itoobiya iyo Eritrea oo aan wali xal waara laga gaadhin.
Ergayga qaramada midoobay ee loo xilsaaray arimaha Itoobiya iyo Eritrea. Mr. Legwaila Joseph , ayaa waxa uu yidhi haddii aan dhaqdhaaqa ka jira soohdinta labadaas wadan si dhakhso ah loo joojin waxaa dhici karta in uu dagaal si deg deg ah ku bilawdo”;
Waxa uuna Mr. Joseph ka codsaday labadaas dawladood in ay si deg deg ah u joojiyaan dhaqdhaqaaqaas oo ay si nabad galyo ah ku xaliyaan khilaafka u dhaxeeya.
Dhinaca kalana. Xogahayaha guud ee Qaramada Midoobey mr. Kofi Anan ayaa dalalka Itoobiya iyo Eritereya ugu baaqay isu soo dabac haddii ay doonayaan inay soo afjaraan khatarta u dhaxaysa, sidaasna wuxuu ku sheegay warbixintiisii ugu denbaysay ee ku saabsanayd horumarka laga gaadhay hawlaha ay Qaramada Midoobey ka dhex waddo dalalka Itoobiya iyo Eritereya ee uu u gudbinayay Golaha Ammaaanka ee Qaramada Midoobey.
Wuxuuna xog-hayuhu warbixintaas ku sheegay inaan wax horumar ah laga gaadhi karin heshiisiinta Eritereya iyo Itoobiya haddii ayna labada dhinac mawqifkooda ka soo debcin.
Kofi Annan wuxuu yidhi; Waa in Asmara iyo Addis Ababa ay dadwaynahooda u sheegaan in wadahadallada joogsaday aan lagaga gudbi karin in dib u-gurasho la sameeyo.
Kofi Annan wuxuu kaloo intaas ku daray in kala aamusnaanta iyo wadahadal la’aantu ay keeni karto xasillooni darro gobolka oo dhan saamaysa, taasoo aan cidhib xumadeeda la qiyaasi karin.
Hase yeeshee Kofi Annan warbixintiisa kuma aanuu canaanan Itoobiya oo diiday go’aankii Qaramada Midoobey ka soo baxay ee lagu qeexay xadka cusub ee ay yeelanayaan dalalka Itoobiya iyo Eritereya, kaasoo ay Itoobiya ku gacan saydhay, ka dib markii Eritea xaq loo siiyay magaaladii uu dagaalku ka billowday ee Bademe.
C/Nuur Sh. MohamedRadio Xoriyo waxaad ka dhegaysan kartaa Mawjadda 19 MB ee dhererkeedu yahay 15670 KHZ, Maalmaha Talaadada iyo Jimcaha 7: 30PM waqtiga Afrikada.
Faafin: SomaliTalk.com | July 16, 2004